Dacar “ Madaxda Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya Is Badal Ayaan Ka Rabnaa” – Goobjoog News
La taliyaha maamulka isboortiga Gobolka Banaadir Cabdiqaadir Xaaji (Dacar) ayaa sheegay in bulshada kubbadda cagta ay doonayaan in ay is badal sameeyeen mas’uuliyeenta Xiriirka Kubbadda Cagta.
“Xiriirka kubbadda cagta waa ha’yadda weyn kama jiran wax hormar balaraan marka laga reebo tartamada gudaha lagu qabto mana jiraan wax horomarin,iyadoo caalamka Soomaaliya uu sanad walib ku taageero dhaqaaqo badan si kor loogu qaado kubbadda cagta Soomaaliya” ayuu la taliyaha ciyaaraha Gobolka Cabdiqaadir Xaaji Dacar u sheegay Goobjoog Sports
Tan iyo 2014 Xiriirka Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya waxaa maamuliyay Cabdiqani Saciid Carab iyo ku xigeenadiisa,waxaana sanadihii lasoo dhaafay lagu dhaliilay wax qabad la’aan iyo dayaacad fara badan oo ka jirta waaxyaha Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya.
“Xiriirka malahan shaqsiyaad gaar ah wuxuu u dhaxeeyaa Soomaali oo dhan nimanka iminka maamula ma ogala in ay dhagaystaan bahda kubadda cagta talooyinkooda,waxayna taasi caqbad ku tahay geedi socodka iyo horomarka kubbadda cagta” ayuu hadalkiisa raaciyay la taliyaha maamulka ciyaaraha Gobolka Cabdiqaadir Muxidiin Xaaji Dacar.
Dad badan ay ku qanacsaneen hanaanka maamulka Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya waxaan lagu eedayaa in waqtiga ugu badan mas’uuliyeenta hogaamisa ay ku lumiyaan is qab qabsi joogta ah iyo arimo kale oo ka baxsan wixii loo igmaday.
“Hadii si sax uu u shaqeyn lahaa Xiriirka Kubbadda cagta waxaa la arki lahaa guulo waaweyn oo muuqda bulshadeena,balse inta ugu badan madaxda Xiriirka waqtikooda ugu badan waxaa hareeyay is qab qabsi joogta ah iyo arimo kale aan habooneyn” ayuu Goobjoog u sheegay Cabdiqaadir Dacar.
Wuxuu sheegay in Dalka iyo dibada ay joogaan dad aqoon yahano ah oo kaalin wanaagsan ka qaadan kara mustaqbalka dhaw horomarinta Xiriirka Kubbadda cagta Soomaaliya,balse aysan haysan fursado ku haboon oo ay ku soo bandhigi karaa aragtidaada iyo qorshahooda ku aada horomarka.
“Waxaan u baahahay in fursad la siiyo dhallinyarada aqoonta wanaagsan ee ka soo bixi karta hogaaminta hanaanka shaqo ee Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya,balse hadafkayga waa in aan waqtiga dhaw aragnaa in uu dhaca is badal” ayuu Goobjoog Sports ugu waramay Cabdiqaadir Dacar.
Si kastaba bisha 2022 ayaa ku eg yahay mudada xileynta guddoomiye Cabdiqani Saciid iyo mas’uuliyeenta kale ee Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya,iyadoo bahda kubadda cagta ay ku haminayaan in ay arkaa is badal ka dhaca Xiriirka.